UKomphela ukhuthaza umdlali ngokushaya amagoli
UKNOX Mutizwa weLamontville Golden Arrows ungomunye wabahamba phambili ngokushaywa kwamagoli kwi-Absa Premiership Isithombe: BACKPAGEPIX
USEDONSWE ngendlebe umgadli weLamontville Golden Arrows, uKnox Mutizwa, ngokuthi abhukule uma ezimisele ngokuba ngumgadli ovelele kwi-Absa Premiership ekupheleni kwesizini.
UMutizwa useshaye amagoli ayisishiyagalombili kwiligi okumenza abalwe nabahamba phambili ngesibalo samagoli okwamanje. Amagoli akhe alingana nawomgadli weHighlands Park, uPeter Shalulile.
Ngempelasonto ushaye elilodwa elibeke i-Arrows phambili ngesikhathi idlala neBlack Leopards eThohoyandou Stadium.
Nokho Abafana Bes’ thende bagcine bekhale ngaphansi ngo 2-1 kulo mdlalo.
Umqeqeshi wabo uSteve “Mphathi” Komphela, uthe uMutizwa ngabe uphume namagoli angaphezulu kwelilodwa kulo mdlalo ukube uyazimisela.
Uma ukujwayele ukubuka imidlalo ye-Arrows ngeke umangale ukuzwa uKomphela ekhuluma kanjena ngalo mgadli wezakhe. Uvamile yena ukushiya abalandeli bebambe amakhanda ngenxa yokugeja esebhekene namapali.
“Ngabe ushaye angaphezulu. Uma engazimisela angaya kude. Ngimtshelile naye egunjini lokushintshela. Uma unethezekile izinto ngeke zisebenze kodwa simfisela konke okuhle. Sithemba ukuthi uzoqhubeka nokushaya amagoli,” kusho uKomphela.
Ebuzwa ukuthi ngabe uyambona engaba wumgadli ovelele, uthe: “Angaba ngoba sakha amathuba amaningi kabi. Kumele awathathe.”
I-Arrows ihlale isonto lonke eLimpopo njengoba iqale ngokudlala neBaroka FC ngesonto eledlule nalapho ithole amaphuzu amathathu inqoba ngo 1-0.
Ukube ikwazile ukubuya namaphuzu agcwele nakwiLeopards ibingazithola inyukela endaweni yesibili kwi-log, ivunwa nangeminye imiphumela yangempelasonto. Ngemuva kwale miphumela isayibambe endaweni yesine ngamaphuzu awu-20. Amaqembu angaphezulu kwayo anamaphuzu awu-21 bese kuba iKaizer Chiefs ezihola phambili ngamaphuzu awu-31.
UKomphela uthe akagculisekile ngamaphuzu ababuye nawo.
“Angigculisekile kahle. Kufanele ngabe siqoqe amaphuzu ayisithupha," kusho uKomphela.
Abahamba phambili ngamagoli:
1. Knox Mutizwa (Golden Arrows) 8
2. Peter Shalulile (Highlands Park) 8
3. Kermit Erasmus (Cape Town City FC) 7
4. Bongi Ntuli (AmaZulu FC) 7
5. Tshegofatso Mabaso (Orlando Pirates) 6